Voronezh State Medical Academy - Study Medicine, Mbbs ee Russia
Medical Voronezh State Academy Details
gaabinta : VSMA
aasaasay : 1802
Ha iloobin in aad wada hadlaan Voronezh State Academy Caafimaadka
Qorto Voronezh State Academy Caafimaadka
The Institution of miisaaniyadda Higher Education Professional «Voronezh State Medical State University magacaabay ka dib markii N.N. Burdenko »Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha ee Ruushka waxaa loo yaqaan mid ka mid ah xarumaha cilmi-baarista iyo waxbaridda keentay dalka ee la wadarta ah oo ku saabsan 5,000 ardayda. Waa mid ka mid ah hay'adaha waxbarashada ugu da'da weyn ee Russia. Its taariikhda dib u aado 1802 - Taariikhda aasaaska University Derpt, taas oo u dhaqaaqay Voronezh in 1918. In 1930, ay awood caafimaad noqday ah machadka caafimaadka ee madax-bannaan, kaas oo gaari xaaladda academy ay 1994. Jaamacadda ayaa cadeeyay in ay ku kacaya sida hay'ad waxbarasho ee bixiya waxbarasho tayo sare leh iyo fulinta cilmi sare ee Medicine, Biology, iyo Farmashiyaha. Tayada ay qaab ka muuqata qiyaasta rating, sida laga soo xigtay oo jaamacadda waxaa ka mid ah in sare toban dugsiyada caafimaadka ee Russia. Tan iyo markii ay aasaaska, waxaa u darbay ka badan 40 kun oo ku takhasusay caafimaadka, oo ay ku jiraan kuwa ajnabiga ah ka 56 dalalka Yurub, Asia iyo Africa.
Founder of The University waa Dowladda RF ah. awoodaha iyo kartida Founder ee ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha ee Ruushka. Jaamacadda waxay leedahay liisanka weligiis ah aawadiis hawlaha waxbarashada iyo aqoonsiga gobolka. Jaamacadda ayaa fulisa hawlaha ay ku saleysan Statute ah.
Dhismaha jaamacadda waxa ay hadda soo bandhigay by 7 kulliyadaha iyo 3 machadyada waxbarasho.
In ka badan 800 xubnaha shaqaalaha oo ay ku jiraan 149 Dhakhaatiirta of Sciences Medical, 91 professors, iyo 525 PhD ee Sciences Medical ay ku lug leeyihiin baridda iyo shaqada sayniska ee 78 waaxaha ee Jaamacadda.
Waxqabadka waxbarashada ee Voronezh State University Medical magacaabay ka dib markii N.N. Burdenko la fuliyaa si waafaqsan barnaamijyada waxbarasho ee ugu weyn ee ay dugsiga ku saleysan heerarka waxbarashada gobolka waxbarashada xirfadeed sare iyo waxbarasho xirfadeed ee la xiriira sare u sabab ah barnaamijyada soo jeediyay koorsooyinka ansixiyo ururada waxbarashada iyo habka u dhiganta.
University ayaa ansixiyay habka simistarka.
Tababarka ayaa undergraduate ka kooban yahay laba marxaladood:
– Pre-caafimaad (1-2 sano);
clerkships Hospital la sameeyo oo ay weheliso daraasadda of nidaamo caafimaad laga bilaabo ah 2nd sano oo waxbarasho;
– caafimaad (3-6 sano).
Facilities oo ka mid ah University
The goobaha of University u adeegaan si ay u daboolaan baahida waxbarasho caafimaad iyo dawooyinka. The dhismayaasha waaweyn iyo xarumaha waxaa soo socda:
– 5 dhismayaasha tababarka
– Clinic ilkaha
– Isbitaalka Carruurta ee Clinical
– 29 goobaha caafimaad oo
– Well-qalabaysan kaxeynayo shaybaarka
– Barashada computer ka helaan internetka
– 6 Research Machadyada
– Maktabadda la stock ah 700 000 items suugaanta waxbarashada iyo sayniska
– nidaamka cuntada dadweynaha waxaa ka mid ah makhaayadda leh cuntada-qolka 120-kursi; sidoo kale waxaa jira cunto fudud-ulood oo ardayda oo dhan hostels iyo University. Ka sokow, ardayda ka tirsan halka tababar goobaha caafimaad ee jaamacadda leeyihiin fursad ay ku isticmaalaan kantiinada ee goobaha caafimaadka.
– ururka daryeelka Caafimaadka. Inta lagu jiro muddada oo dhan waxbarasho, ardayda undergraduate iyo postgraduate waxa kormeera shaqaalaha caafimaadka oo ka mid ah Xarunta degmada Healthcare «City Bukaan Clinic #15 (Clinic Student)»Waayo, magaaladii Voronezh. Xaruntu waxay la jaalka caafimaadka ee Clinic ku yaalla dhawaanshaha degdeg ah Hostel #3 adeegtaa loogu talagalay ardayda.
– goobaha isboortiga waxaa ka mid ah ciyaaraha iyo taam adag la meel tirada guud ee 2838.2 m² (xarunta indoor) qalabaysan a dabaasha-pool, aagga qalaama, bar juice, iyo qol isku dayo baaritaanka a.
kala duwan A weyn ee foomamka iyo habka waxbaridda waxaa loo isticmaalaa. Waxay yihiin:
– Foomamka dhaqanka waxbariddii: muxaadarooyin, siminaaro, fasallada iyo clerkships isbitaalka ku ool ah.
– Hababka casriga ah cilmiga iyo farsamooyinka: fasalo kombiyuutar iyo Internetka, cilmiga dhibaato ku salaysan, fasalada video-ku salaysan, software waxbarashada.
– koorsooyin doorasho.
– Is-barashada waxaa lagu dhiirigelinayaa.
Imaanshada fasallada iyo clerkships Waa waajib in ardayda oo dhan.
xirfadaha Clinical lagu horumariyo inta lagu guda jiro boosaska ee goobaha caafimaad ee isbitaalada la jaalka. Laga bilaabo ka 2nd sano oo waxbarasho, cilmiga ku salaysan qaybta waxaa lagu taageeray iyada oo xoogga ku saabsan xiriirka bukaan-dhakhtar. clerkships waxaa kormeeraya by takhaatiirta aqoonta sare iyo khibrad.
Labada aqoonta iyo qiimaynta xirfadaha caafimaad teori farsamooyinka waxaa ka mid ah:
– Baarista Caafimaadka
– Gudbay / buundooyin imtixaanada
– koox ahaan uga doodaan.
shahaado Final waxaa loo sameeyaa iyada oo imtixaanka kama dambeysta ah ee gobolka, kaas oo ku siin qiimeyn ah ee aqoon iyo xirfado caafimaad.
The hawlaha ka baxsan manhajka ardayda ee loo qoondeeyey by ururada dadweynaha iyo diiradda on abuurista xaaladaha raaxo ay firaaqada, is-urur, iyo is-xaqiijinta. The Center for Initiatives Dhaqanka Ardayga, Sports Club Ardayga, Sayniska Ardayda Society, Golayaasha Hostel Ardayda ', kooxaha ardayda ', kooxo dhalinyaro iskaa wax u qabso waxaa loogu talagalay si ay ula kulmaan caqabadaha.
Caqlina General Medicine, Pediatrics, Ilkaha, farmashiyaha, iyo Medicine hortagga takhasusay tareen ku salaysan ee waxbarashada dugsiga sare oo dhamaystiran.
The Kuliyada Maamulka Caafimaadka Horumarinta Tababar madaxda caafimaadka ee aqoonta leh in ay ka shaqeeyaan si fiican jawi bulsho iyo dhaqaale oo cusub oo awood.
The Kuliyada Studies Graduate siinayaa fursad ay ku sii wataan waxbarashadooda barnaamijyada internship sida ay ugu waaweyn ee la doortay ama koorsada deganaanshaha, taas oo ah qayb ka mid ah qaab-dhismeedka multilevel waxbarashada caafimaadka sare ee Ruushka.
Machadka Caalamiga ah ee Waxbarashada Caafimaadka iyo Iskaashiga Tababar ku takhasusay dalalka shisheeye.
The Institute of Nursing Advanced Tababar ku takhasusay ku salaysan ee waxbarashada dugsiga sare xirfadeed oo dhammaystiran gaar ah.
The Institute of Tababarka Advanced taageertaa horumarinta xirfadaha xirfadeed iyo shaqaalaha tababar caafimaad.
Ma rabtaa wada hadlaan Voronezh State Academy Caafimaadka ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Voronezh State Academy Medical on Map
Photos: Voronezh State Medical Academy rasmiga ah Facebook
dib u eegista Academy Medical Voronezh State
Ku biir si ay ugala hadlaan of Voronezh State Academy Caafimaadka.
Ruush State University of Oil and Gas Moscow